Khasaaraha dhimashada ee ka dhashay qaraxii xooganaa ee xalaya ka dhacay goob bandhig Faneed uu ka socday oo kutaala magaaladsa Manchester ee dalka Ingiriiska ayaa noqotay mid sii kororta.
Dhimashada ayaa hada gaartay 22-qof oo ay ku jiraan caruur iyo haween, waxaa sidoo kale qaraxan aadka u xooga badnaa ku dhaawacmay dad gaaraya 59-qof oo qaarkood qabaan dhaawacyo culus sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka.
Ciidamada amaanka ayaa xiray aaga halkii uu qaraxu ka dhacay waxaana weli socda baaritaano xoogan oo lagu ogaanayo cidii ka dambeysay qaraxan khasaaraha badan dhaliyay ee ka dhacay gudaha magaalada Manchester .
Goobta uu xalay qaraxa ka dhacay ayaaa ahayd hool ay ka socotay bandhig faneed ay qabaneysay fanaanada caanka ah ee Ariana Grande, ee u dhalatay dalka Mareykanka, qaraxa kadib ayaana waxaa hoolka ka dhacay kala carara iyo argagax badan.
Qaar kamid ah dadkii ku sugnaa goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa sheegay in mar qura ka war heleen jugta qarax aad u xoogan kadibna arkeen dad badan oo hoolka daadsan oo isugu jira kuwa dhintay iyo kuwa dhaawacmay.
Golaha Wasiirada ee dalka Ingiriiska iyo laamaha sirdoonka ayaa kulan ka yeeshay qaraxii xalay ka dhacay magaalada Manchester, waxaana qaraxan dowlada Ingiriiska ku tuhmeysaa in uu yahay mid argagaxiso.
May 23, 2017 Geesey